Ipholile kunye neBelle. Ikwindawo ephakathi Kwindalo! - I-Airbnb
Ipholile kunye neBelle. Ikwindawo ephakathi Kwindalo!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguBernd
N.B Le ndlu ilungele abantu abadala abayi-2
Xa ndaqala ukugcakamela umkhondo, kwi-2CV yakudala, kwiminyaka emininzi eyadlulayo, ndandisithi gqi kule ndawo. Uxolo noxolo lwengqondo lwendawo. Lo moya usasele.
Elinye iqela lezindlu zefama zamatye ezindala, ezihlala kumathambeka asezantsi entlambo entle epholileyo. Indlu enegadi enkulu yabucala, enemithi ephandle, kunye nendawo entle yokuphumla.
Ukuba umntu uthatha umzila omncinci, owehla egqitha kwiinduli ezinamahlathi, owona mbono wokuqala onawo luphahla olubomvu lweqela lezindlu zamatye ezindala, ezithi ndijonge ezantsi kwakho. Ifama yakudala,ukususela ngenkulungwane ye-17, eyayikade ihlala iintsapho ezintathu nayo yonke imfuyo yazo.
Siye sawugcina umoya wendawo,kusekho iigusha kumasimi aselumelwaneni.
Yakhiwe kumathambeka asemazantsi entlambo entle, enokuthula, ephakathi kweedolophana zaseLos Angeles neBourdeaux kwisebe leDrôme. S .E France.
Le ndlu ibalungele abantu abadala ababini.
Le ndlu inekhitshi elitofotofo,eliqaqambileyo, elinento yonke/igumbi lokuhlala elinento eyenza kufudumale ngombane.
I-V kunye nevidiyo.
Igumbi lokuhlambela , elinebhafu, ishawa ebanjwa ngesandla, i-w.c & handbasin, kunye nomatshini wokuhlamba impahla. Konke kumgangatho osezantsi.
Phezulu. Inqwelo-moya enye yezitepsi ukuze ufike kwigumbi lokulala.
Kukho igumbi lokulala elilala abantu ababini elinye elinebhedi endala enobhedu. 1m60 ububanzi. (w.c & handbasin en suite)
Ibhedi enye kwigumbi lokulala elahlukileyo
Ngaphandle umntu unokuthi zava ngasemanzini aluhlaza echibini (elisetyenziswa nangabanye abantu), (livuliwe ekuqaleni kukaMeyi)
phumla egadini,phantsi kwendawo yakho enomthunzi egqunyiweyo, ulele kwibhedi ekuthiwa yi-hammock phakathi kwemithi ye-mulylvania kunye ne-walnut, pheka ukutya kwakho okumnandi "al fresco" kwindawo yokoja.
Kwiifama ezimbalwa kuphela ngaphaya kwentlambo,akukho nto ingako yokuviwa kunokuba kubekho iintsimbi zeegusha kunye nokulila kweentaka kwiinyanga zehlobo. Ngentwasahlobo ingoma entle yasebusuku inokuviwa ehlathini elikufutshane.
Iilali zethu ezikufutshane, yiBourdeaux (8kms) kunye neFreulefit (10kms) Ngoko ii-croissants zasekuseni azikho kude kakhulu. Zombini ezi lali zinezinto zonke ozidingayo xa uthenga yonke imihla. Sineevenkile zokutyela ezintle, zombini ezilula zasekuhlaleni kunye nokutya okulula, kumgama okulula. Le ndawo inabantu abaninzi abanomdla wokundwendwela. Kukho iimarike zasekuhlaleni ezinemibalabala. Imijelo ecacileyo yeentaba apho
unokuqubha khona Indawo entle yokuhamba.
ukuhamba ngebhayisekile, ukukhwela amahashe kunye nabathandi beentaka kunye neentyatyambo zasendle.( 37 ii-orchid ezahlukeneyo ezichazwe kule ndawo!)
Kukho nemidiliya esemagqabini yaseCôtes du Rhône onokuyityelela uze ungcamle kufutshane(ezininzi eziphilayo
) Asikwazi ukufikelela kwizithuthi zikawonke-wonke, kodwa kuphela kwidolophana yethu ekufutshane (iFreulefit okanye iBourdeaux)
"Iindlela ezingekho ntle kangako" * Kwiimbaleki zasezintabeni, abantu abahamba ngeenyawo, abakhweli beebhayisekile kunye nabathandi bemvelo!
Le yindawo eye yahlala intle kakhulu kuyo yonke iminyaka.
Ngasentla kukho iintaba zasendle ezitshayileyo zeVercors & Diois. Imilambo efihlakeleyo enemilambo eluhlaza, iilali zeentaba ezinamatye.
Ubutyebi beentaba ezimangalisayo!
Kumzantsi, uvula ummandla weProvençe, kunye neziqholo ezifudumeleyo zeentsimi ze-lavender, ecaleni kwemigca yeediliya ezimnyama eziluhlaza, kunye ne-chateaux. Iimarike zasekuhlaleni ezinemibalabala!
Sikhona ukuze sikuncede, sikunike namacebiso amahle xa kufuneka ukuze uyonwabele ngokupheleleyo le ndawo.
Intle iimbaleki zasezintabeni, abantu abahambahambayo nabathandi bendalo!
Imilambo yeentaba ecacileyo, iingxangxasi ezimangalisayo. Kuyamangalisa ngehlobo nakubo bathanda ukuhlamba amanzi asebusika abandayo!
Intle iimbaleki zasezintabeni, abantu abahambahambayo nabathand…